တူရကီကို F-35sတိုက်လေယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးမိတ်ဖက် စာရင်းကနေ အမေရီကန်ထုတ်ပယ်။ ( ရုရှား ဆီက S-400 စနစ်တွေ ဝယ်ခဲ့တဲ့ အကျိုးအဆက်တွေကို ခံစားနေရပြီလား တူရကီ….) – New Of Burmese
တူရကီကို F-35sတိုက်လေယာဉ်ရောင်းဝယ်ရေးမိတ်ဖက် စာရင်းကနေ အမေရီကန်ထုတ်ပယ်။ ( ရုရှား ဆီက S-400 စနစ်တွေ ဝယ်ခဲ့တဲ့ အကျိုးအဆက်တွေကို ခံစားနေရပြီလား တူရကီ….)
ယင်းအစား ပိုလန်ကိုအခွင့်အရေးပေးရန် ရီပတ်ဘလီကန်အမတ်များလိုလား
F-35 Lightning II တိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း စံချိန်တင်အနေနဲ့ အမှာစာ၁၂၃ခုကို လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ လော့ဟိမာတင်ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဌဖြစ်သူ Bill Brothertonက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲတယ်လို့ Military.Comမှာ သတင်းရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လို့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် သူတို့အနေနဲ့ အမှာစာတွေကို ပြည့်မီအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ အမေရီကန်လေတပ်မတော်အတွက် ၇၄စင်းနဲ့ မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေအတွက် ၃၁စင်း ပို့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လို့ S-400တွေကို ရုရှားဆီကနေ ဝယ်ယူဘို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ တူရကီကိုတော့ အမေရီကန်ဘက်က F-35s မဟာမိတ်ဖက်စာရင်းထဲကနေ ထုတ်ပယ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ တူရကီကို မိတ်ဖက်စာရင်းထဲကနေ ထုတ်ပစ်ပြီး သြဂုတ်လထဲမှာတော့ အမေရီကန်ရီပတ်ဘလီကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေက မဟာမိတ်တွေရဲ့ ပေါင်းစည်းမှုကို ခိုင်မာစာရေအတွက် ပိုလန်ကို လမ်းဖွင့်ပေးဘို့ တွန်းအားပေးဆောင်ရွတ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ အခုဆိုရင် ပိုလန်နိုင်ငံဟာလည်း သူတို့ရဲ့လေတပ်အတွက် ဒေါ်လာ၆.၅ဘီလီယံတန်ဘိုးရှိတဲ့ F-35A၃၂နဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုလန်နိုင်ငံဟာဆိုရင် တစ်ချိန်က ဝါဆောစစ်စာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အနောက်အုပ်စုနဲ့ ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပမေယျ့လို့ ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ ကိုဗဈကပျရောဂါကွောငျ့ သူတို့အနနေဲ့ အမှာစာတှကေို ပွညျ့မီအောငျမလုပျနိုငျခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
အဲဒီအထဲမှာ အမရေီကနျလတေပျမတျောအတှကျ ၇၄စငျးနဲ့ မိတျဖကျနိုငျငံတှအေတှကျ ၃၁စငျး ပို့ပေးနိုငျခဲ့တယျလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လို့ S-400တှကေို ရုရှားဆီကနေ ဝယျယူဘို့ဆုံးဖွတျခဲ့တဲ့ တူရကီကိုတော့ အမရေီကနျဘကျက F-35s မဟာမိတျဖကျစာရငျးထဲကနေ ထုတျပယျပဈခဲ့ပါတယျ။ တူရကီကို မိတျဖကျစာရငျးထဲကနေ ထုတျပဈပွီး သွဂုတျလထဲမှာတော့ အမရေီကနျရီပတျဘလီကနျအထကျလှတျတျောအမတျတှကေ မဟာမိတျတှရေဲ့ ပေါငျးစညျးမှုကို ခိုငျမာစာရအေတှကျ ပိုလနျကို လမျးဖှငျ့ပေးဘို့ တှနျးအားပေးဆောငျရှတျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့လို့ အခုဆိုရငျ ပိုလနျနိုငျငံဟာလညျး သူတို့ရဲ့လတေပျအတှကျ ဒျေါလာ၆.၅ဘီလီယံတနျဘိုးရှိတဲ့ F-35A၃၂နဲ့ ဆကျစပျပစ်စညျးတှကေို ဝယျယူသှားတော့မှာဖွဈပါတယျ။ ပိုလနျနိုငျငံဟာဆိုရငျ တဈခြိနျက ဝါဆောစဈစာခြုပျအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတဈခုဖွဈပမေယျ့ အခုနောကျပိုငျးမှာတော့ အနောကျအုပျစုနဲ့ ခိုငျမာတဲ့ဆကျဆံရေးကို တညျဆောကျနတောလညျးဖွဈပါတယျ။
Previous Article တရားမ၀င်လုပ်သားများကိုမှတ်ပုံတင်ရေး အစိုးရအဖွဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရန် ထိုင်းပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လုပ် ဆောင်နေ
Next Article ဒီလို လေးစားဖွယ် ထိုင်းလူမျိုးတွေရှိတာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေအတွက် ဝမ်းသာစရာပါပဲ..